वडा नं ४ — News of The World
संसार न्यूज संवाददाताआश्विन १८, २०७५
पर्वत जिल्लाको पैञ्यू गाउँपालिकामा अचम्मै भएछ पाठकबृन्द । के को अचम्म भन्नुहोला हजुरले महाअचम्म भनेपनि हुन्छ ।
यस्तो महाभूकम्प वडा नं ४ को विषयमा भएको पाठकबृन्द । वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष महेन्द्रकाजी श्रेष्ठ, सत्तारुढ दलका जल्दा बल्दा नेता हुन पाठकबृन्द । उनको गल्ती भनौ कि परिस्थितिले उनलाई थोपरेको पद भनौं । उनी तत्कालिन पैञ्यू गाउँपालिका अध्यक्ष लड्ने गरी हन हनी गरेर नेपाल आए । अन्तीममा उनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष नभएपछि वडा ४ मा अध्यक्ष लडे र अत्यधिक बहुमतका साथ जिते ।
सत्तारुढ दलका ३ वटा वडा अध्यक्षमध्ये प्रभावशाली ठानिने उनी जापान जाने आउने गरेको इश्र्या केही मान्छेलाई आफ्नो ठाउँमा हुँदो हो । उनी जेष्ठ सदस्यलाई कार्यबाहक सुम्पेर जापान गएको खबर कार्जेकारीले अध्यक्षलाई नदिएको भन्दै उपाध्यक्षलाई कार्यबाहक थम्याएर स्पष्टीकरण सोधियो रे ! नियतै गलत भएको भन्दै धर्ना आन्दोलन पनि उठ्यो रे पाठकबृन्द ।
७२ घण्टा नबित्दै राम्रो सँझौता भएछ । सबै मिलेर अघि बढ्ने । दुवैथरीको प्रक्रिया नपुगेको स्वीकार गर्दै ‘गल्ती’ महसुस भएछ । सबै मिलेर योजना बनाउने र अनुगमन गर्ने निर्णय भएछ । आखिर वडा नं ४ हो, पाठकबृन्द । सबै खोतलेर ल्याउँदा फिल्म नै बन्छ पो भन्छन त त्यताका मुन्छेहरु !
संघीयताको मज्जा !